Iziko leLux Emerita
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJuan Antonio
Indlu eqaqambileyo kakhulu. Ngaphandle, iimitha ezimbalwa ukusuka kwezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi besixeko, kanye embindini. Ixhotyiswe ngokupheleleyo. Ngokujonga indawo yayo ekhethekileyo, ukusuka eLux Emerita ungandwendwela ezona ndawo zinomtsalane zedolophu ngeenyawo. Ilungele ukutyelela isixeko kwaye ube nendawo yakho yokuhlala kumgama weemitha ezimbalwa. Ucoceko njengendawo eyomeleleyo ye-Wi-Fi, umoya we-AC. Ukubanda / Ubushushu, umatshini wokuhlamba izitya, intsimbi, isomisi seenwele, ikiti yokuthunga. Eyona ndlela yokonwaba Emerita Augusta.
I-Lux Emérita yenziwe ligumbi lokuhlala elitofotofo, eline-air conditioning, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elidityaniswe kulo, eline-dishwasher, i-oven microwave, ifriji, itoaster, umenzi wekofu onedosi enye, njl. Igumbi lokulala kunye nebhedi ye-Queen ubukhulu (i-150 cm), i-wardrobe enkulu kunye ne-air conditioning, igumbi lokuhlambela labucala kunye ne-hairdryer kunye nomatshini wokuhlamba.
I-Lux Emerita, ibekwe entliziyweni yeMerida, ecaleni kwePuerta de la Villa kunye neofisi yezoKhenketho. Ifakwe kwenye yezitrato eziphambili zokuthenga edolophini.
Iimitha ezimbalwa sinendawo yokupaka yabucala. Indawo ezolileyo enazo zonke iintlobo zezinto eziluncedo kunye neevenkile ezikungqongileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Juan Antonio
ULux Emérita unesitshixo esinekhowudi yokhuseleko eyenzelwe umntu ngamnye kuxolo lwakho lwengqondo. Ukwazi ukubaluleka kobumfihlo bakho kwaye nangakumbi xa sisebenzisana nobuntu boluntu. Kwi-Lux Emerita, sinakho, nge-imeyile, ifowuni, i-sms. ..
Ukwamkelwa ngobuqu. Ukubakho kokufika ngokuzimeleyo.
ULux Emérita unesitshixo esinekhowudi yokhuseleko eyenzelwe umntu ngamnye kuxolo lwakho lwengqondo. Ukwazi ukubaluleka kobumfihlo bakho kwaye nangakumbi xa sisebenzisana nobuntu bo…
UJuan Antonio yi-Superhost